Promo.com: Umhleli weVidiyo elula kwi-Intanethi yeeVidiyo zeMidiya yoLuntu kunye neeNtengiso zeNtlalo | Martech Zone
Promo.com: Umhleli weVidiyo elula kwi-Intanethi yeeVidiyo zeMidiya yoLuntu kunye neeNtengiso zeNtlalo
NgoMvulo, Juni 24, 2019 NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Nokuba upapasha iaudiyo okanye ividiyo, uyazi ukuba ngamanye amaxesha loo mxholo uyinxalenye elula. Yongeza ukuhlela kunye nokusebenza kweqonga ngalinye lentlalontle kwaye ngoku uchitha ixesha elininzi kwimveliso kunokuba urekhoda. Oku kuphazamiseka kungoko uninzi lwamashishini luthintela ividiyo nangona ividiyo iyindlela yokunyanzelisa.
I-Promo.com liqonga lokuyila ividiyo yamashishini kunye neearhente. Banceda abasebenzisi ukuba benze imixholo ebonakalayo kunye neevidiyo ezingenamda zokukhuthaza nantoni na abayifunayo ngokufanelekileyo. Iqonga lokuhlela ividiyo ekulula ukulisebenzisa lenza abasebenzisi bakwazi ukwenza iividiyo ezipakishwe ngokupheleleyo ngabaqulunqi abaphumelele amabhaso- kwaye kubandakanya uyilo lwentengiso, ikopi kunye nomculo ofanayo.
Iqela kwi-Promo.com mandipapashe le vidiyo imfutshane indithathe nje imizuzu embalwa ukuyenza. Imifanekiso eqingqiweyo yesitokhwe, isitayile kunye nomculo zonke zazifumaneka kwitemplate endiyikhethileyo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, iqonga ngokuzenzekelayo lenze umbono olungiselelwe i-Instagram kunye nevidiyo ethe nkqo. Ndenze uhlengahlengiso oluncinci kwiifonti ezinobungakanani, kodwa oko kuthatha imizuzwana embalwa!
Usebenzisa i-Promo.com, unokwenza iividiyo okanye iintengiso zevidiyo, kubandakanya:
Izithuba zevidiyo zeFacebook kunye neeNtengiso
Ukuvalelwa kweVidiyo yeFacebook -Isixhobo sasimahla asifuni kubhaliswa!
Iiposti zevidiyo ze-Instagram kunye neeNtengiso
Izithuba zeVidiyo eziDibeneyo kunye neeNtengiso
IiVideos zeYouTube kunye neeNtengiso
Iqonga linee-stock footage kunye neetemplate ezilungele ukuya kushishino, ukuThengisa izindlu, ukuThengisa, ukuHamba, i-E-commerce, kunye neGaming. Unokufumana iividiyo zemihla ekhethekileyo, intwasahlobo, iPasika, uSuku lwePatrick, uSuku lweValentine, okanye uSuku loMdlalo.
Yenza ividiyo yakho yokuqala yePromo.com ngoku:
Yenza ividiyo yePromo.com
tags: Khuthazwaukukhuthaza.comintengiso yoluntuisitokhwe sevidiyo
Ipateni89: Ukuthengisa isoftware yeAI kwintengiso yakho yedijithali